ရုရှားနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ခြင်းကို တားဆီးရန် လစာပြည့်ခွင့်ယူခြင်းအား ပူတင် ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ လမ်းမတစ်နေရာတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသော ဖြတ်သန်းသွားလာနေသူများအား ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မော်စကို၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သောသေဆုံးမှုများ မြင့်တက်လာခြင်းကို တားဆီးရန် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အထိ နိုင်ငံတစ်ဝန်း အလုပ်လုပ်ရက်မဟုတ်သောနေ့များတွင် လစာပေးထားခြင်းစတင်ရန် အဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသခံအာဏာပိုင်များက အဆိုပါ အားလပ်ရက်များကို စောလျင်စွာစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် အကယ်၍လိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ပူတင်က အစိုးရအစည်းအဝေး၌ ပြောခဲ့သည်။
၎င်းအဆိုပြုချက်အား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Tatyana Golikova က အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်၌ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် Mikhail Mishustin က ထိုအဆိုပြုချက်ကို “မရှိမဖြစ် ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခု” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါချိန် စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ နေ့စဉ်ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆက်စပ်သောသေဆုံးမှုများမှာလည်း ထပ်ခါထပ်ခါစံချိန်တင်ခြင်းဖြင့် ရောဂါဒဏ်ကို အဆိုးဝါးဆုံးတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။
ရုရှာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားသူအတည်ပြုလူနာအသစ် ၃၄,၀၇၃ ဦးရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက် ၈,၀၉၄,၈၂၅ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူအနေဖြင့် ၂၂၆,၃၅၃ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-20 23:37:29|Editor: huaxia
MOSCOW, Oct. 20 (Xinhua) — Russian President Vladimir Putin said on Wednesday he supportsaproposal to introduce paid non-working days across the country from Oct. 30 to Nov.7to containahike in COVID-19 infections and related deaths.
According to the country’s official monitoring and response center, Russia confirmed 34,073 new COVID-19 cases over the past 24 hours, taking the nationwide tally to 8,094,825, while the nationwide death toll grew to 226,353. Enditem
Photo : Pedestrians wearing face masks walk onastreet in Moscow, Russia, on Jan. 15, 2021. Russia recorded 24,715 more COVID-19 cases over the past 24 hours, roughly the same as in the previous day, the country’s COVID-19 response center said Friday. The national tally has thus increased to 3,520,531 with 64,495 deaths and 2,909,680 recoveries, the center said. (Xinhua/Evgeny Sinitsyn)